Farmaajo oo u dhoofaya waddanka Koongo | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo u dhoofaya waddanka Koongo
Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo ayaa goor dhaw ka dhoofaya garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde Airport, isagoo kusii jeeda waddanka Koongo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Farmaajo ayaa galay gudaha garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde, halkaasoo goordhow diyaarad ay ka qaadi doonto, isaga oo ku sii jeeda magaalada Kinshasa ee waddanka Koongo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ku sii jeeda dalka Jamhuuriyadda Dimoqraadiga ee Koongo. Ilo ku dhow-dhow Madaxtooyada Villa Somalia ayaa sheegaya in safarkiisa uu la xiriiro wada hadal la filayo in laga dhex bilaabo waddamada Soomaaliya iyo Kenya.
Madaxweynaha Koongo Felix Tshisekedi ayaa ah Madaxa Midowga Afrika ee xilligan, waxa uuna qaabili doonaa madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya Farmaajo iyo Uhuro Kinyata oo isna la filayo inuu maalinimada khamiista gaaro dalka Koongo.
Xiriirka labada waddan ayaa xumaaday, iyadoo dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in ay xiriirkui ujartay Kenya. Khilaafka labada waddan ayaa salka ku haya laba arrimood oo kala ah:
Tan hore madaxweyne Farmaajo oo diiday in lala laabto dacwada badda ee Soomaaliya taasoo loo gudbiyay maxkamadda ICJ ama ugu yaraan la baajiyo.
Tan labaad ee muranka sare uqaadday waxay tahay in dowladda Kenya ay ka joojiso taageerada dowlad goboleedka Jubbaland taasoo ay diiday xukuumadda Nairobi.
Waa safarkii ugu horreeyay ee uu dibadda ku aado tan iyo wixii ka dambeeyay 8/Febaraayo oo ahayd markii uu dhammaaday muddo xileedkiisa, waxa uuna horay uga baaqday safar uu ku tagi lahaa waddamada Itoobiya iyo Eratariya. Farmaajo ayaa markuu helay muddo kordhin laba sano ah kaddib oo muran xooggani ka dhashay wuxuu dib ubillaabay safarradiisa dibadda.
Dilka Askari Soomaaliyeed oo dhawaan meydkiisa laga helay god qashin ku yaaalla Muqdisho, ayaa lagu eedeeyay nin la yiraahdo Kullane Jiis oo ay Farmaajo xigto yihiin, saaxiib dhowna la ah Fahad Yaasiin.
Warar 17 May 2021 21:15